1. Khaladaadka hawlgalka
Cadaadiska duritaanka biyaha ayaa sarreeya saamayntiisuna waa weyn tahay, oo beebka birta galaaska ah ma saamayn karo culeyska. Ka dib markii la isticmaalay, hawlwadeenkii ayaa si khalad ah u rogay hannaankii wuxuuna qabtay cadaadiskii, hawlgalkuna wuxuu ahaa mid aan dheeli tirnayn, kaas oo sababi doona in ay ka daataan khadkii biibiile birta galaaska ah.
2. Tallaabooyinka ka -hortagga
Sida ku cad SY/T6267-1996 “Dhuumaha Maro adag ee Cadaadiska Sare”, J/QH0789-2000 Buckle FRP Pipe Construction and Acceptance Accept. Harbin Star FRP Co., Ltd. “Tilmaamaha Rakibaadda Nidaamka Khadka Tuubooyinka Fiberglass-ka ee dunsan”, oo tixraac GB1350235-97 “Xeerka Dhismaha iyo Oggolaanshaha Injineerka Dhuumaha Birta Warshadaha”, si looga hortago cilladaha tayada caadiga ah, qabta dhismaha mid kasta habka, iyo hubinta tayada dhismaha. Iyadoo la eegayo 6 -da sababood ee dillaacay, tallaabooyin ka -hortag ayaa la soo jeediyay (eeg Shaxda 1).
Ka dib markii uu soo daato qadka biibiile birta dhalada ah, tallaabooyin waa in isla markiiba la qaadaa si looga hortago wasakhowga deegaanka. Habka dhismaha ugu waxtarka badan ayaa ah in la gooyo qasabadaha oo la isticmaalo adabtarada birta si loo xiro. Hawlaha ugu waaweyn ayaa hakinaya wax soo saarka, helidda dillaacyada, qodista, dib-u-warshadaynta bullaacadaha, rakibidda dunta goobta, rakibidda wareejinta birta Habka isku xirka tuubooyinka dhiska dhismaha (fiiri sawirka 1)
(1) Ka hor intaan la jarin oo aan la samayn koollo, sida waafaqsan shuruudaha dhismaha ee nidaamka HSE, waa in cajalad digniin ah lagu jiido aagga dhexe, waana in la dhejiyaa calaamadaha digniinta marka la galayo qaybta dhismaha. Ka dib markii uu baxsadku dhaco, ilaha duritaanka biyaha ayaa la gooyaa si loo yareeyo cadaadiska eber, iyo bulaacadaha ayaa dib loo soo ceshanayaa waqti ka dib qodista si looga hortago burburka godadka tuubada oo dadka waxyeeleeya.
(2) Ka dib markii aad aragtay biibiilaha FRP, dhererka qaadista waa inuusan ka badnaan 1m, xagalkuna waa inuusan dhaafin 10 ℃. Marka la goynayo oo la samaynayo koonyada, waa ammaan waana ku habboon tahay in laga dhiso dhulka. Farqiga ugu sarreeya wuxuu ka badan yahay 2m (dhuumaha waxaa lagu aasay 1m qoto dheer). Labada dhinac ka qod meesha ka dillaacda. Ugu yaraan 20m kor.
(3) Ku-rakibidda dunta goobta
Habka rakibidda dunta goobta: goynta cutting goynta dabargoynta → isku xidhka dunta goobta → kululaynta iyo dawaynta. Barta baxsiga goynta ayaa ka fiican 0.3m. Dooro Furimaha Rakaabka ee ku habboon (soo -saaraha waxaa lagu qalabeeyay qalab gaar ah). Koonku waa inuu nadiif ahaadaa, oo aan lahayn dufan, boodh, qoyaan, iyo dhejisku waa inuu si siman u qasan yahay. Dahaadhka dhammaadku wuxuu ku xidhan yahay inuu ka saaro goobooyin hawo oo ku yaal dusha isku xidhka, ka dibna gacanta u rog si aad u adkayso. Waqtiga daaweynta ee dhejiska waxaa lagu go'aamiyaa hadba heerkulka deegaanka. Heerkulka cimilada iyo waqtiga daaweynta ayaa lagu muujiyey Shaxda 2.
Xilliga jiilaalka, heerkulka dhismuhu wuu hooseeyaa, wakhtiga joogsiga duritaanka biyuhuna kama badnaan karo 24 saacadood. Habka kululaynta iyo daawaynta korontada ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo gaabiyo wakhtiga dhismaha. Marka loo eego waayo-aragnimada dhismaha iyo astaamaha koollada, saamaynta daaweynta ugu fiican ayaa lagu gaari karaa 3-4 saacadood gudahood, iyo wadarta waqtiga xidhitaanka dhismaha waxaa lagu xakameeyaa 8 saacadood gudahood. Kuleylinta suunka kuleylka korontada waxaa lagu xakameeyaa 30-32 ℃, waqtiga waa 3 saacadood, waqtiga qaboojinta waa 0.5 saacadood. Shuruudaha awoodda kulaylaha (eeg Shaxda 3).
(4) Ku rakib wadajirka beddelidda birta. Dunta dibedda ku taal iyo beddelidda birta dunta gudaha waa inay nadiif ahaataa, oo dufanka wax lagu xiraa waa in si siman loo adeegsadaa. Ma jiro quwad leh wrench. Ka dib markaad gacanta ku adkayso, adkee laba toddobaad oo kale. Haddii ay jirto tirooyin leh maroojin, riix Adkee miisaanka tirooyinka wareegga qiyaasta (eeg Shaxda 4).
(5) Shaqaalaha alxanka waa inay haystaan ​​shahaado. Inta lagu guda jiro hawsha alxanka, isku-beddelka biraha waa in la qaboojiyaa, heerkulkuna waa inuusan ka badnaan 40 ° C, haddii kale kaneecada goobta ku jirta ayaa la gubi doonaa oo baxsadku wuu dhici doonaa.
(6) Dib -u -buuxinta godadka tuubooyinka. Gudaha 0.2m ee ku wareegsan dhuumaha, waxay 0.3m ka sarraysaa dhulka dabiiciga ah ka dib markii lagu buuxiyey ciid ama ciid jilicsan.
4. Gabagabada iyo talooyinka
(1) Khadka biibiile bir-galaas-cadaadis sare leh ayaa loo adeegsadaa soo saarista ceelasha duritaanka biyaha iyo qayb ka mid ah khadka jirridda duritaanka biyaha ee Jianghan Oilfield, kaas oo xalliya daxalka iyo daloolka dhuumaha, wuxuu yareeyaa wasakhaynta, wuxuu kordhiyaa nolosha adeegga dhuumaha dhuumaha, oo kaydiya maalgashiga.
(2) Iyada oo la hirgelinayo, teknolojiyadda dhismaha ee khadadka biibiile biraha dhalada ee cadaadis sare leh ayaa la jaangooyay, xaddiga waqtiga duritaanka biyaha ayaa la kordhiyay, wax-soo-saar ammaan ah ayaa la hubiyay, iyo dhismaha ilbaxnimada ayaa la gaaray. Laga soo bilaabo 2005, celceliska baxsiga waxaa la dayactiray 47 jeer, iyo soosaarka saliidda ceyriin ee sanadlaha ah wuxuu kordhay in ka badan 80 tan.
(3) Waqtigan xaadirka ah, khadadka biibiile biraha ka samaysan fiberglass dhexdhexaad ah iyo cadaadis sare (0.25 MPa ~ 2.50 MPa), goysyada wax-ka-samaynta iyo isku-beddelka birta ayaa loo adeegsadaa dayactirka baxsiga, kaas oo qaata waqti dheer oo aan daxalaysnayn. Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, ayaa la soo saaraa cusbi xoog leh, hindiseyaal, wakiilo daaweeya, dardargelin iyo agab xoojinaya. Adeegsiga isku-dhejisyada dhejiska ah ee khadadka biibiilaha bir-galaas ka samaysan fiberglass dhexdhexaad iyo cadaadis sare waxay u baahan tahay cilmi-baaris dheeraad ah.
Xalka dhibaatooyinka taxanaha wax soo saarka ee qaloocan
Ka dib marka la soo saaro waxsoosaarka dabaysha ee FRP, waxaa jiri doona dhibaatooyin kala duwan xagga tayada alaabta. Dhibaatooyinkan si fiican ayaa loo tirtiri karaa oo looga fogaan karaa falanqaynta gaarka ah ee alaabta ceyriinka ah, waxyaabaha lagu daro, habka iyo arrimo kale. Kuwa soo socdaa waxay soo bandhigaan dhibaato caadi ah oo ku jirta maroojinta alaab-bannaan.
Noocyada aasaasiga ah ee bannaan
1. Xumbooyinku waxay ku jiraan gudaha xidhmada fiber -ka, oo lagu duudduubay xidhmada fiber -ka, waxaana lagu sameeyay dhinaca jihada xidhmada fiber -ka.
2. Meesha bannaan waxay inta badan ka soo baxaysaa godadka u dhexeeya lakabyada iyo meesha uu cusbadu ku ururto.
Falanqaynta sababta farqiga
1. Walxaha xoojinaya gebi ahaanba kuma dhalan matiniin matrix, qayb ka mid ah hawaduna waxay ku hadhay maaddada fiber -ka, taas oo ay ku lifaaqan tahay cusbi adag oo ku wareegsan.
2. Dhibaatada xabagta lafteeda. Ugu horreyn, xabagta ayaa lagu qasi jiray hawo inta lagu guda jiray hawsha diyaarinta, taas oo aan gabi ahaanba la tirtiri karin waqtiga; Intaa waxaa dheer, markii xabagta la geliyay oo la adkeeyay, molecules yaryar ayaa la soo saaray falcelin kiimiko ah awgeed, walxahan yar-yar-yarna ma baxsan karaan waqtiga.
Tallaabooyinka lagu dhimayo daldaloolada
1. Qalabka la doorbiday
Marka la eego sifooyinka alaabta ceyriinka ah, dooro alaabta ceeriin oo isbarbar dhiga.
2. Xoojinta bacriminta
Impregnation waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi -socodka wax ka samaynta walxaha isku dhafan, waana furaha geedi -socodka goobooyin ama faaruq. Sidaa darteed, bacriminta waa in la xoojiyaa si loo yareeyo goobooyinka loona hagaajiyo tayada badeecada.
3. Xakamaynta isku darka
Ka hor inta aan la isticmaalin xabagta, bilaabayaasha, dardar -geliyeyaasha, wakiilada isku -xidhka, buuxiyeyaasha budada ah, dab -damiyayaasha, wakiilada antistatic iyo midabada ayaa lagu dari doonaa. Marka la isku darayo oo la isku darayo, hawo badan ayaa la soo gelin doonaa, waana in la qaadaa tallaabooyin lagu tirtirayo.
4. Isku hagaaji xabagta
Qoojinta xabagta waa hab muhiim u ah soo saaridda qalabka FRP/ka kooban. Haddii fiilada dhalada ee aan si fiican loo dulin ama xabagta aysan ku filnayn, xariir cad ayaa la soo saari doonaa ka dib marka la dhex maro taangiga xabagta.
5. Badeecadaha duuban
Marka dunta xariirta cad lagu dhaawaco caaryada asaasiga ah, ifafaalahan waxaa lagu tirtiri karaa oo kaliya habka curiyaha caaryada ee muhiimka ah. Waa in lagu tirtiraa duubista duubka warshadda. Duubitaanku uma fiicna oo keliya in la quusiyo, laakiin sidoo kale wuxuu ka dhigi karaa badeecadda mid isku dhafan, si xabagta xad -dhaafka ahi ugu qulqulayso ama uga fog tahay qaybo la'aan, waxay yaraynaysaa meelaha bannaan ama goobooyin, waxay ka dhigaysaa badeecadda mid ku habboon, cufan, oo leh waxqabad fiican.
6. Iska yaree buundada
Waxa loogu yeero buundada waxaa loola jeedaa ifafaalaha ah in dunta xabagta ee alaabtu ay kor saaran tahay, ifafaalahanna wuxuu jiraa dhammaadka iyo foostada labadaba.
(1) Haddii qalabku ku adag yahay wax -soo -saarka, si liidata u saxsan yahay, oo aan degganayn hawlgalka, dunta si lama filaan ah ayaa loo habeeyay, is -dul -saaran oo si lama filaan ah loo kala saaraa, xadhiggii caadiga ahaa ee asalka ahaa lama xaqiijin karo, oo dusha sare ee fiber -ku waa sahlan tahay inay dhacdo. Wakhtigan, hagaajinta dayactirka iyo qalabka waa in lagu fuliyaa waqtiga.
(2) Ballaca cad ee dunta dhabta ah waa in la hagaajiyaa si uu ula mid noqdo ama ugu dhow yahay ballaca gabal -dhiska ee loo qoondeeyey.
(3) Xakamee xaddiga xabagta.
(4) Lambarka Fiber, maroojin, dheef -shiid kiimikaad iyo daaweynta dusha fiber -ka ayaa dhammaantood saamayn gaar ah ku leh dusha sare ee fiilooyinka dabaysha.
(5) Heerkulka cimiladu wuxuu kaloo saamayn gaar ah ku leeyahay dusha sare ee fiber -ka.
Kormeerka iyo dayactirka alaabooyinka boogta fiilada
Kormeerida alaabada isku-dhafka ah ee fiilada
Badeecadaha isku-dhafan ee fiber-nabarka, guud ahaan fiiro gaar ah u yeelo kormeerrada soo socda.
1. Kormeerka muuqaalka
(1) goobooyin Hawada: Dhexroor xumbo ugu badan ee la oggol yahay oo dusha sare ee lakabka u adkaysta daxalka waa 5mm. Haddii ay jiraan wax ka yar 3 xumbo oo leh dhexroor aan ka badnayn 5mm halkii mitir labajibbaaran, lama dayactiri karo. Haddii kale, goobooyinka waa in la xoqo oo la dayactiro.
(2) Dildilaacyo: Ma jiri doonaan dildilaacyo ka sarreeya 0.5mm qoto dheer dusha sare ee lakabka u adkaysta daxalka. Dusha sare ee lakabka xoojinta waa inuu leeyahay dildilaacyo qoto dheer ah 2 mm ama ka badan.
(3) Qulqullan iyo qallafsan (ama duudduub): Dusha sare ee lakabka u adkaysta daxalka waa inuu ahaadaa mid siman oo siman, dhumucda xariijinta iyo qaybta isku dhafan ee lakabka xoojinta waa inaysan ka badnaan 20% dhumucda.
(4) Caddaynta: Lakabka u adkaysta daxalka waa inuusan yeelan caddeyn, iyo dhexroorka ugu sarreeya aagga caddeynta ee lakabka xoojinta waa inuusan ka badnaan 50mm.
2. Kormeer cabbir
Iyada oo la raacayo shuruudaha sawirrada, baaxadda badeecadaha waa in lagu hubiyaa aalado lagu cabiro oo leh saxnaan iyo baaxad habboon.
3. Kormeerka darajada dawaynta iyo makarafoorka dahaarka
(1) Kormeerka goobta
a) Ma jirto wax dhegdheg ah marka aad taabanayso dusha alaabta la isku daray.
b) Ku duub suufka nadiifka ah acetone oo ku rid dusha alaabta si aad u fiiriso in dunta suufku midabkeeda beddeshay iyo in kale.
c) Miyuu dhawaaqa soo baxay adigoo ku garaacaya alaabta gacantaada ama shilimaadka aan caddayn ama qalalan?
Haddii gacantu dareento dhegdheg, dunta suufka ah ayaa midabkeedu yahay, oo sanqadhu ay caato tahay, daaweynta dusha sare ee alaabta ayaa loo arkaa mid aan u qalmin.
(2) Kormeer sahlan ee heerka dawaynta ee maaddooyinka isku -dhafan ee furan
Qaado muunad oo ku dhex geli weel ay ku jirto qadar yar oo acetone ah, shaabadee, oo qoyso 24 saacadood. Dusha sare ee muunaddu waa mid siman oo dhammaystiran, acetone -ku ma beddelo midabka oo calaamad u ah dawaynta.
(3) Kormeerida iyo tijaabinta heerka dawaynta badeecada
Baaritaanka adkaanta Barcol waxaa loo isticmaalaa in si dadban loo qiimeeyo heerka dawaynta walxaha isku jira. Tijaabiye adag oo Barcol ayaa la isticmaalaa. Tusaaluhu wuxuu noqon karaa HBa-1 ama GYZJ934-1, oo cabirka Barcol ee la cabbiray waxaa loo isticmaalaa in lagu beddelo qiyaasta qiyaasta daaweynta. Adkaanta Barcol ee alaabta isku dhafan ee boogta leh oo leh dawayn habboon ayaa guud ahaan ah 40-55. Heerka dawaynta badeecada ayaa sidoo kale si sax ah loo tijaabin karaa iyadoo la raacayo xeerarka khuseeya GB2576-89.
(4) Ogaanshaha makarafoorka dahaarka leh
Markay daruuri noqoto, dahaarka isku-dhafan waa in la tijaabiyaa oo lagu baaraa qalabka dab-dhaliyaha korontada ama qalabka daloolka yar-yar.
4. Kormeerka waxqabadka alaabta
Tijaabi sifooyinka kuleylka, jirka iyo farsamada ee badeecada iyadoo la eegayo waxa ku jira imtixaanka ee looga baahan yahay dukumintiga tilmaamaha shaqada iyo halbeegga imtixaanka ee loo qoondeeyey si loo helo saldhig u ah aqbalaadda sheyga.
5. Kormeerka dhaawaca
Markii loo baahdo, tijaabin aan burburin ee alaabada sida iskaanka ultrasonic, raajo, CT, sawirka kuleylka, iwm ayaa loo baahan yahay si sax ah loo falanqeeyo loona go'aamiyo cilladaha gudaha ee sheyga.
Falanqaynta cilladda alaabta, tallaabooyinka xakamaynta iyo dayactirka
a) Xumbooyinkii hawada si buuxda looma wado. Lakab kasta oo faafinta iyo dabaysha waa in si isdabajoog ah loogu duuduudaa rullaluistemadka, oo rullaluhu waa in laga dhigaa nooc zigzag wareeg ah ama nooc jeexitaan dheer ah.
Iyadoo aan loo eegin delamination-ka ay sababtay sabab kasta ha noqotee, delamination-ka waa in si fiican loo saaraa, iyo lakabka resin ee ka baxsan aagga cilladdu waa in lagu nadiifiyaa mashiinka xagal ama mashiinka wax lagu nadiifiyo oo ballackiisu ka yar yahay 5cm, ka dibna dib loo dhigo shuruudaha habka. Dabaqa
Wax -soo -saarka tijaabada shaybaarka ee isku -dhafan ee caadiga ah
Agabyada isku dhafan badiyaa waa qalab anisotropic ah, iyo hababka falanqaynta naqshadeynta way ka duwan yihiin kuwa birta ah. Astaamaha anisotropic ee agabyada isku dhafan waxay horseedaan farqiga u dhexeeya hababka tijaabada waxqabadka ee alaabada isku dhafan iyo alaabada birta ah. Agab dhaqameedka, naqshadeeyayaashu waxay ka heli karaan xogta wax -qabadka buugga ama tilmaanta maaddada ee uu soo -saaruhu bixiyo marka loo eego maaddada (ama sumadda) marka la dooranayo alaabta. Maaddada isku dhafan ma aha mid aad u badan maadaama ay tahay qaab dhismeed sax ah. Wax -qabadkiisu wuxuu la xiriiraa arrimo badan sida matrixka cusbi, qalabka xoojinta, xaaladaha hawsha, waqtiga kaydinta iyo bay'ada.
Aad bay lagama maarmaan u tahay in la tijaabiyo wax -soo -saarka alaabta ceeriin ka hor inta aan la qaabaynin agabyada isku -dhafan, laakiin lama odhan karo xogta wax -qabadka ee lagama maarmaanka u ah naqshadeynta ayaa la bartay. Waxa kaliya oo la tixgelin karaa in xulashada alaabta ceeriin ay aasaaska u dhigtay. Waqtigan xaadirka ah, natiijooyinka saadaalinta hababka micromechanics -ka ayaa weli xaddidan waxaana lagu qiyaasi karaa oo keliya tayo ahaan. Xogta wax -qabadka ee looga baahan yahay naqshadaynta qaybaha isku -dhafan waxay u baahan tahay in lagu helo imtixaannada waxqabadka aasaasiga ah, taas oo muhiim u ah shaqada naqshada.
Tijaabinta wax -qabadka walxaha isku -dhafan ayaa saldhig u ah xulashada maaddada, qiimeynta qalabka xoojinta, matrix -ka cusbi, astaamaha is -dhexgalka, xaaladaha wax -ka -beddelidda iyo heerarka farsamada wax -soo -saarka, iyo sidoo kale naqshadeynta alaabta.
1. Saxanka isku -dhafan ee fiilooyinka aan tooska ahayn
Sifooyinka laastikada ee isku -dhafka unidirectional waxaa lagu gartaa sifooyinka gilgilashada iyo cadaadiska 0 digrii, 90 darajo, iyo 45 digrii, iyo astaamaha is -dhexgalka ee ka dhexeeya fiber -ka iyo cusbi waxaa lagu gartaa imtixaannada xiiridda ee foorarsiga. Si loo qiimeeyo astaamaha maaddada, iyadoo la raacayo shuruudaha gaarka ah ee heerarka qaranka GB3354-82, GB3856-83, GB3356-82, GB3357-82, GB3355-82, soo-saaridda saxanka walxaha ka kooban fiber-ka aan tooska ahayn waa la dhammaystiray, iyo ka dibna saxanka walxaha isku -dhafan ee fiber -ka ayaa loo farsameeyaa noocyo kala duwan Cabbirka iyo tirada muunadda ee looga baahan yahay habka imtixaanka.
1. Soosaarka saxan walxaha ka kooban oo aan lahayn farta
Habka loo leexinayo ayaa ah in laga sameeyo fiber -ka laga soo saaray shiirka iyada oo la dhex marayo xiisad, jeexidda xabagta, roogga hagaha dunta, iyo siligga dabaysha dabaysha markeeda si loogu dhaawaco dusha caaryada asaasiga ah, ugu dambaynna la adkeeyo oo la sameeyo. Heerka qaranka ayaa qeexaya in cabbirka qaab -dhismeedka uu yahay 270mm X 270mm. Qaab -dhismeedka waa la dhaawici karaa si loo sameeyo laba taargooyin fidsan (hore iyo gadaal) mar, kaas oo loo farsameyn karo fidinta, cadaadinta, foorarsiga, xiirida dhexda, iwm.